HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulMaalinta la filayo ee Mashruuca Giant, Saldhigyada Channel Istanbul
07 / 03 / 2015 34 Istanbul, GUUD, Headline, TURKEY
Maalintii Sugitaanka Mashruuca Weyn ayaa timid, Channel Tenders Tenders: Raiisul wasaare Erdogan wuxuu ku dhawaaqay intii uu ra'iisul wasaarahu ahaa 'mashruuc waali ah' wuxuu qaadayaa talaabada Channel Istanbul. Mashruucan ayaa la rajaynayaa in lagu xaraasho 2 bilood gudahood.
DUKAANKA BADAN EE LA SAMEEYAA MARMARA
Intii lagu jiray doorashadii 2011, Erdogan wuxuu ku dhawaaqay dhowr mashruuc oo mega ah wuxuuna ku dhawaaqay mashruuc muhiim ah oo soo jiidatay indhaha adduunka waqtigaas oo uu noqday Raiisul Wasaaraha. "Crazy Project" group shaqada ka kooban mashruuca kanaalka ah kuwaasi oo ku xidha lahaa badda xumeeyayna iyo Badda Madow, oo loo yaqaan sharafta Turkey ee adduunka ayaa la lagu doonayo in la kordhiyo xitaa more.
ERDOĞAN HOOSE KA DHAGEYSO CUDURKA DHULKA
Madaxweyne Erdoğan wuxuu markasta ku adkaysan lahaa in mashruucan oo wakhti ka soo baxay ajandaha 2011, inuu nolosha soo noolaan doono, laakiin aan wax talaabo ah laga qaadin. In kasta oo howlaha qabyada ah ee kanaalka si qarsoodi ah loo fulinayo, 45 waxaa loo qorsheeyay in ay ahaato kiiloomitir dhererkeeda waxaana loogu talagalay in lagu yareeyo taraafikada maraakiibta.
Dakhliga Dakhliga La Filayaa
Mashruuca Target waxaa lagu fulin doonaa dhexeeya 2023, Turkey ayaa waxaa sidoo kale ay noqon doontaa kiiska halis ah oo lacag ka qaadista abuurid hawlo dakhli tanka halkii markabka.
MAGAALO CUSUB WAA LAGA SAMEEYAA
Sida ku cad faahfaahinta la caddeeyay ee mashruucan, magaalo cusub ayaa laga dhisi doonaa labada dhinac ee Kanal Istanbul. Magaaladan, halkaas oo wadarta guud ee 500 kun oo qof loo qorsheeyay inay ku noolaadaan, guryuhu ma noqon doonaan wax ka badan dabaqyada 6. Buundooyinka 6 ee kanaalada sidoo kale ajandaha ayaa laga wadaa, mashruucan ayaa la filayaa in lagu hirgaliyo qiimo aad uga sarreeya bilyanka 20 bilyan doolar.
XIGASHADA KA DIB XULASHADA
Turkiga Channel ee mashaariicda ka tarjumaya aragtida 2023 ugu horeysay qodaya ee Istanbul ayaa la filayaa inuu ku dhacay xnumx't ah. Dowladda, oo qorsheyneysa inay ku dhufato mashruucan wixii ka dambeeya doorashooyinka June, ayaa isu diyaarinaya inay dalbadaan bisha 2015.
ISKUULADA IYO HORUMARKA BADBAADADA GUUD EE JOOJINTA
Channel Istanbul, oo lafteeda maalgelin kara, ayaa la qorsheynayaa in lagu hirgaliyo iyada oo aan wax qarash ah lagu darin gobolka, tusaale qaab dhismeedka-wareejinta ah. Iyada oo lagu dhawaaqayo qandaraaska, waxaa la filayaa in faahfaahinta mashruucu ay sii caddaan doonto qaybta qaybta wax soo iibsaneysa ay noqoneyso mid firfircoon.
Adana - Mersin Stations Line 3-aad iyo 4-aad Mashruuca Si loo bilaabo qandaraaska…
Tareenka Eurasian ee Ka Soo Baxaya Maalinta Taariikhda Ku Dhaca
Baabuur cusub ayaa imaanaya IZBAN iyo İzmir